Adin-tsaina mandritra ny fitondrana vohoka amin'ny daty manaraka
Araka ny antontan'isa, 80% amin'ireo vehivavy manantena zazakely, mandritra ny fitondrana vohoka, dia manenina. Izany toe-javatra izany dia ny fahatsapana sy ny lolom-po ao amin'ny faritry ny tratra sy ny tenda, izay matetika no miseho vetivety aorian'ny sakafo.
Ny faharetan'ny fanafihana ny fireharehana dia mety tsy miovaova amin'ny 5 minitra ka hatramin'ny ora maromaro, raha toa ka manampy fotoana fohy fotsiny ny fanafody. Ny fanafihana avy any am-ponja any amin'ny reny mitaiza dia mitranga mandritra ny fitondran'ny vohoka, na izany aza, matetika no mitranga izany amin'ny manaraka.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiteny aminareo izahay hoe maninona ny firehetan'ny vehivavy bevohoka amin'ny teny farany, ary inona no hatao mba hanamaivanana ny toe-pahasalamanao.
Nahoana no mitranga ny fately mandritra ny fitondrana vohoka?
Ny fiterahana mandritra ny fitondrana vohoka any aoriana dia matetika vokatry ny antony manaraka:
Fanitsakitsahana ny hormonal background. Mandritra ny fotoam-piandrasana iray manontolo, dia miovaova hatrany ny fiavahan'ny hormonalin'ilay vehivavy. Indraindray ny fahatsapana ny tsy fahatsapana ao amin'ny vavony dia miseho amin'ny vanim-potoana taty aoriana, fa amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny soatoavina "hormonal" sery mampijaly ny renim-pianakaviana efa hatrany am-piandohana.
Matetika amin'ny faran'ny fotoana hiandrasana an'ilay zaza dia tsy afaka manatanteraka ny asany ny sphincter satria miteraka tsindry ao anatiny, izay miteraka firehitra.
Ny tranon-jaza mihalehibe amin'ny fiafaran'ny fitondrana vohoka dia manosika mafy ny tsinay sy ny vavony, izay mety hitarika amin'ny fanipazana ny tsiranoka ao amin'ny kanseran'ny atidoha.
Ny fanimbana dia mety miteraka fanafihana ny fireharehana.
Farany, ny fiterahana mandritra ny fitondrana vohoka mandritra ny vanim-potoana taty aoriana dia mahatonga ny fanehoana an-dranomamy misy menaka. Amin'io tranga io, ny zaza dia mipetraka ao an-kibon-dreniny miaraka amin'ny rambony, ary ny lohany dia mampitombo ny diapragma mitombo, izay mampiroborobo ny fisehoana fihetseham-po tsy mahazo aina.
Ny toe-javatra toy izany dia azo jerena raha manantena ny reny mitaky ny fahaterahan'ny zaza lehibe iray, ary koa amin'ny trangan'aretina maro.
Azo atao ve ny foza avy hatrany alohan'ny fampakaram-bady?
Ny vehivavy sasany dia mahatsapa fo mamelombelona mandritra ny 9 volana. Maro amin'izy ireo no mino fa mihamafy ny fiterahana mialoha ny fandefasana, ary tena gaga izy ireo rehefa indray andro any, dia tsy mitsahatra tampoka ny fampijaliana azy ireo.
Raha ny marina, ny fampitsaharana tampoka ny fireharehana dia manondro ny fisainana akaiky amin'ny fahaterahana. Rehefa misy vehivavy bevohoka mamindra ny kibony, alohan'ny hivoriana amin'ny zaza vao teraka dia maharitra roa herinandro. Amin'izao fotoana izao, ny fanerena be loatra avy amin'ny vavony sy ny diaphragma dia fongana, ary ny renim-pianakaviana miverimberina dia miverina.
Ny fitsaboana ny havizanana mandritra ny fitondrana vohoka mandritra ny vanim-potoana manaraka
Indrisy anefa, ny ankamaroan'ny vehivavy bevohoka dia tsy mamela ny fo mamela heloka mandritra ny telo volana farany amin'ny fanantenana zazakely. Mandritra izany, ireto torohevitra manaraka ireto dia hanampy anao hampihena ny fisehoany ary hampihenana ny isan'ireo tranga:
mandritra ny torimaso eo an-doha sy amin'ny soroka dia tokony hametraka ondana ambony;
Mihinàna matetika, fa amin'ny ampahany kely. Ankoatra izany, tsy tokony hihinana avy hatrany eo anoloan'ny fandriana ny olona iray;
Aza malaina, tadiavo ny lamosinao;
Raha tsy misy ny tsy fahampian-tsakafo aorian'ny sakafo, dia afaka mihinana papay iray ianao;
Avy amin'ny fihinanan'ny reny amin'ny hoavy, ilaina ny manaisotra ny vokatra sasany, izany hoe: mofo vaovao, voankazo matavy, atody lava, voatabia, voankazo ary tsaramaso, gilasy.
Raha misy fanafihana tsy hay lazaina amin'ny fiterahana amin'ny datin'ny fiafarana, dia azo atao ny fanafody toy ny Almagel, Rennie, Gaviscon na Maalox.
Azo atao ve ny mitondra ny nify?
Symptoms of embryo implantation in the uterus
Mitondra fluid amniotique na fitsaboana?
Fetal nandritra ny fitondrana vohoka
Mandrobona mandritra ny fitondrana vohoka eo am-piandohana
Ahoana no ahafahana mitsambikina mandritra ny fitondrana vohoka?
Ny lanjan'ny fetal isaky ny herinandro - latabatra
Vodina nandritra ny fitondrana vohoka
Tsiranoka alohan'ny fiterahana
Kitapo Yellow-body - inona no azon'ireo oviana miafina?
Adult grafting to adults
Inona no mahasoa ny serizy?
Fangatahana fampakaram-bady miaraka amin'ny sarona iray - ny fomba tsara indrindra sy ny lamaody
Kaitlin Jenner dia nanao kapa ho fanohanana ny Trump
Ny mpankafy an'i Monica Bellucci dia nandiso fanantenana
Ny fikarakarana ho an'ny oviana amin'ny fety
Bartholinitis - Antony
Inona no fampiasana hanesorana ny vavony?
Ankizy Celine Dion
Voninkazo vita amin'ny tanimanga polymère
Akanjo sandale 2016
Fanamafisana ny family
Jeans-paka ho an'ny vehivavy bevohoka